January 24, 2021 - Online Hartha
တစ်ကိုယ်လုံး တန်ဖိုးတွေတွက်ပြတာ ခေတ်စားလာတော့ ကြုံဖူးတာလေး ပြောပြချင်တယ်
January 24, 2021 by Online Hartha
တစ်ကိုယ်လုံးတန်ဖိုးတွေ တွက်ပြတာ ခေတ်စားလာတော့ ကြုံဖူးတာလေးပြောပြချင်တယ်…. ဟိုးတစ်​​လောက အန်​ကယ်​တစ်​​ယောက်​ သူ့နာရီချွတ်​ပြီး” ဒီနာရီဘယ်​​လောက်​တန်​မယ်​ထင်​လဲ မှန်းကြည့်​” ဆိုပြီး ကျွန်​​တော့်​ကို​​မေးတယ်​….။ (သူကချမ်းသာ ​အောင်​မြင်​​နေတဲ့ ကုမ္ပဏီပိုင်​ရှင်​တစ်​ဦးပါ) မမှန်းတတ်​ဘူးခင်​ဗျ လို့​ပြောလိုက်​​တော့ သူက ပြန်​​ပြောတယ်​….။ အ​မေရိကန်​​ဒေါ်လာ ၆သိန်း တန်​တယ်​တဲ့………မြန်​မာ​ငွေနဲ့ဆို သိန်း ၇၈၀၀ ​ကျော်​တန်​တာ​ပေါ့…..။(အမ​လေးဗျ… အံ့သြလို့မပြီး​သေး..) “ဟိုပွဲ ဒီပွဲ အခမ်းအနား​တွေမှာ တစ်​ခါလာလည်း ဒီနာရီ တစ်​ခါလာလည်း ဒီနာရီ ဖြစ်​​နေမှာစိုးလို့…. ​ဒေါ်လာ ၆သိန်း ၇သိန်း တန်​ နာရီချည်း ၅ လုံး​လောက်​ ၀ယ်​ထားတယ်​” ဆို​တော့…..ဟို​က်……ရှားဘား……ကျွန်​​တော်​ ပက်​လက်​လန်​သွားတယ်​…..။ (ကိုယ်​​တွေ တစ်​မျိုးလုံး တစ်​​ဆွေလုံးပိုင်​ဆိုင်​မှုကို​ပေါင်းရင်​​တောင်​ သူ့နာရီဖိုး​မရှိဘူး….) ဒါ​ပေမဲ့…..အခု​တော့ အဲ့ဒီနာရီထဲက တစ်​လုံးပြီး တစ်​လုံးပြန်​​ရောင်း​နေပြီတဲ့….” စီးပွား​ရေးအတွက်​​ငွေလိုလို့လား…..အန်​ကယ်​..” လို့​မေးလိုက်​​တော့…. ” မဟုတ်​ဘူး…..ဆင်းရဲတဲ့ … Read more
အပျို စစ်စစ် များသာဖတ်ရန် အအိုတွေဖတ်မိရင် စိတ်ဓါတ်ကျမှာစိုးလို့ပါနော်
အပျို စစ်စစ် များသာ ဖတ်ရန် အအိုတွေဖတ်မိရင် စိတ်ဓါတ်ကျမှာစိုးလို့ပါနော်… ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး တမျိုး မထင်ပါနဲ့နော် အအိုတွေဖတ်မိရင် စိတ်ဓါတ်ကျမှာစိုးလို့ပါ… အပျိုစစ်စစ်ဆိုတာက ခုခေတ်က ၁၆ နှစ်၁၇နှစ်ဆိုရင်ကို ရည်းစားက ရှိနေကြတာ ။ ရည်းစားဖြစ်တာ ၁ ရက်မကြားဘူး living together က နေနေကြပြီလေ တကယ်တော့ လက်မထပ်ရသေးပဲနဲ့ အတူတူနေကြတာ မိန်းခလေးတစ်ယောက်အတွက် လုံးဝတန်ဖိုးကျသွားပါပြီ…အပျိုစင် ဘဝဆိုတာ ယောင်္ကျားတိုင်းရဲ့ တန်ဖိုးထားခြင်းကို ခံထားရသူလို့တောင် တင်စားထားကြပါတယ်အပျိုစင်ကနေ အအို ဖြစ်ဖို့က ၅မိနစ်မကြာပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် အအိုကနေ အပျို ပြန်ဖြစ်ဖို့က ရှိသမျှ စည်းစိမ်း ပုံပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ ဘဝအတွက်ပြန်မရနိုင်တော့ပါဘူး ချစ်သူရှိခဲ့ရင်လည်း ဒီအပျိုစင်ဘဝကို ထိန်းသိမ်းပါ။ ချစ်သူကို နားလည်အောင် သူသဘောပေါက်အောင် ပြောပြထားပါ။ … Read more
ခွဖေဝါး ၊ဖနောကျ ကှဲခွငျးအတှကျ အိမျတှငျး နညျးလမျးလေးမြား
ကျွန်တော် တို့ဟာ နေ့စဉ် နေ့တိုင်း မျက်နှာ အရေပြားကိုသာ အချိန်ပေးပြီး ဂရုစိုက်နေကြပြီး နေ့စဉ် လှုပ်ရှား ရုန်းကန်နေရတဲ့ ခြေထောက်တွေကိုတော့ ဂရုစိုက်ဖို့ မေ့နေတတ်ပါတယ်။ရာသီဥတု ပူပြင်းခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်က လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်များ ပြတ်လပ်ခြင်း၊ အရေပြား ကျန်းမာရေး ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း စတာတွေကြောင့် ခြေဖနောင့်ကွဲတာ ဖြစ်ပေါ်လာနိင်ပါတယ်။ ခြေဖနောင့်ကွဲပြီဆိုရင် သွားလာရ အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်စေရုံသာမက စီးထားတဲ့ဖိနပ်ကို မချွတ်ရဲရလောက်အောင် အလှပျက်စေနိင်ပါ တယ်။ ခြေဖနောင့်ကွဲခြင်း၊ အက်ခြင်းတွေအတွက် အိမ်တွင်းသုံး ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုပြီး သဘာဝအတိုင်း ဘယ်လို ကုသလို့ရနိုင်မလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သဘာဝပျားရည်က အရေပြားပေါ်မှာရှိတဲ့ ဆဲလ် အသစ်တွေကို မွေးထုတ်ပေးဖို့ အားပေးတဲ့ အာနိသင် ရှိပါတယ်။ ရေနွေးအနည်းငယ်ကို ပျားရည်အနည်းငယ်နဲ့ ရောစပ် သမအောင်မွှေပြီး … Read more
မျက်နှာအသားရေ မဲညစ်နေလျှင် အလွယ်ကူဆုံး ဖြေရှင်းနိုင်
မျက်နှာပေါ်က အရေးကြောင်းနဲ့ ဝက်ခြံတွေ ကင်းဖို့ဆိုရင်
မျက်နှာပေါ်ကဝက်ခြံနဲ့ အရေးကြောင်းတွေပျောက်ကင်းဖို့ အုန်းဆီ၊ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါတို့နဲ့ နေ့တိုင်းမျက်နှာသစ်မယ် နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းရေး ပစ္စည်းတွေထဲမှာ မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာဟာ အသားအရေ စိုပြေလှပဖို့အတွက် အရေးကြီးဆုံး အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာထက် အသားအရေထိန်းသိမ်းဖို့ သဘာဝမျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာကိုပြုလုပ်လိုက်ရအောင်ပါ။ အုန်းဆီနဲ့ မှုန့်ဖုတ်ဆိုဒါဟာ အသားအရေအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများပြီး သဘာဝပစ္စည်းတွေမို့ အရေပြားပျက်စီးမှာ စိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ အုန်းဆီနဲ့ မှုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကို ဝက်ခြံ၊ မျက်နှာမှာ အနီစက်ဖြစ်တာ ၊ အမာရွတ်တွေနဲ့ အရေးကြောင်းတွေအပါအဝင် ဆဲလ်အသေတွေကို ဖယ်ရှားလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်း မှုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ အုန်းဆီ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လောက်သုံးမယ်ဆိုတာကတော့ သင့်အသားအရေအမျိုးအစားပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ အသားအရေက ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့ အသားအရေ (Sensitive Skin) ဆိုရင် အုန်းဆီနဲ့ မှုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကို ၂ ချိုး ၁ ချိုးရောစပ်ပေးရပါမယ်။ တခြားအသားအရေအတွက်ဆိုရင်တော့ … Read more
အမျိုးသမီးများ ယောက်ျားမသိအောင် တိုးတိုးတိတ်တိတ် ဖတ်ထားလိုက်ပါ
တစ်ရက် ဗေဒင်ဟောခန်းသို့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရောက်ချလာသည် ။ဘာအကူအညီ ပေးရမ လဲ အဒေါ်ဟု မေးလိုက်ရာ အဓိကကတော့ ကျွန်မရဲ့ ယောင်္ကျားနဲ့ သားသမီးတွေ အခုတလော အိမ်ကို ကပ်တယ်ကို မရှိဘူး ဆရာလေး။အိမ် မကပ်တော့ ကျွန်မက စိတ်တိုင်း မကျဖြစ်။ စိတ်တိုင်းမကျတော့ ကျွန်မက အော်တော့တာပေါ့။ ကျွန်မက အော်တော့ ဒင်းတို့က နားပူတယ်ဆိုပြီး အိမ်မှာ မနေချင်ကြပြန်ဘူး။ အဲဒီတော့ ဆရာရယ် ကျွန်မဖြစ်ချင်တာက ကျွန်မ ယောက်ျားနဲ့ ကလေးတွေ အိမ်ကပ်စေချင်တယ်။ အိမ်မြဲစေချင်တယ်။ ခြေမများ စေချင်ဘူး။ အဲဒါကို ကူညီပေးပါဟု ပြောလေ၏။အင်း… အဲဒီအတွက်တော့ စိတ်မပူပါနဲ့အဒေါ်ရေ။ ကျွန်တော် အခုပြောလိုက်တဲ့ ယတြာကိုသာ ဆောင် ရွက်လိုက်ပါ။ လင်ရော သားသမီးတွေရော တစ်ယောက်မကျန် အဒေါ်စကားတွေကိုလည်း … Read more
နှဈထောငျပေးမယျ ငါးထောငျပေးမယျဆိုပွီး ခွတေျောတငျဖို့ ကွိုးစားသူတှေ
နှစ်ထောင်ပေးမယ် ငါးထောင်ပေးမယ်ဆိုပြီး ခြေတော်တင်ဖို့ ကြိုးစားသူတွေ ဝိုင်းနေတဲ့ ၁၈ နှစ်ရွယ် ကလေးအမေ ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ ပျက်ပြားလာကြသလို တချို့သူတွေကလည်း စာနာမှုတွေ ကင်းမဲ့လာကြပါတယ်… ဒုက္ခရောက်နေသူကို ကူညီမယ် မရှိဘူး… ညည နှစ်ထောင်ပေးမယ် ငါးထောင်ပေးမယ်ဆိုပြီး ၁၈ နှစ်အရွယ် ကလေးအမေကို ခြေတော်တင်ဖို့ လုပ်နေကြသူတွေ ရှိတယ်တဲ့… ဒါပေမဲ့ ကလေးအမေရဲ့ ဖြူစင်တဲ့စိတ် ငွေအလွယ်မလိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့် ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့သလို ခုဆို ကူညီသူပါရှိလာပါပြီ… ဒီအကြောင်းလေးကို လူမှုကွန်ရက်မှာ ဖော်ပြထားတာ တွေ့လို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်… ညည နှစ်ထောင် ငါးထောင် ကိုပဲထိုင်ယူနေရင်တောင် သူ့သမီးလေးနဲ့သူ အဆင်ပြေတဲ့ဘဝ ရနိူင်ကောင်းရဲ့။ သို့သော်လဲ ဇာမဏီငှက်တို့ရဲ့နှလုံးသားလိုမျိုး အသက်သေမှ အမြှီးကျွတ်ခံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ အနီးနား အဝတ်လျှော် မီးပူတိုက်ရင်းဖြူစင်စွာ သားအမိနှစ်ယောက် အသက်မွေးမြူကြတယ်။ အိမ်ကအစုတ် … Read more
အမည် ၊သင်္ချာ ၊ဝိဉာဉ် ၊ဂဏန်းအဟော
အမည် သင်္ချာ ဝိဉာဉ် ဂဏန်းအဟော အနောက်တိုင်း ဂဏန်းဗေဒင်နည်းအရ အမည်သင်္ချာဝိဉာဉ် ဂဏန်း တွက်ပုံတွက်နည်းကို ဦးစွာ ဖေါ်ပြလိုပါသည်။ ဒီနည်းက ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျွန်တော်စာဖတ်တဲ့အခါမှတ်စုထုတ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်း တစ်အုပ်အုပ်ထဲမှာ ပါတဲ့နည်းပါ။ (မဂ္ဂဇင်းတော့ မမှတ်မိတော့ပါ.ဂမ္ဘီရဆန်းကြယ်လို့ထင်ပါတယ်.)ကိုယ်တိုင် တွက်စစ်လို့ရအောင်ပါ။ဤနည်းမှာ နာမည်တစ်ခုခုကို သိရှိရုံမျှနှင့် တွက်ချက်နိုင်ပါသည်။ အောက်ကပုံမှာဖေါ်ပြထားသည့် အက္ခရာစာလုံးများနှင့် သင်္ချာသက်မှတ်ချက်များအရ နာမည်တစ်ခု၏ အမည်သင်္ချာ ဝိဉာဉ်ဂဏန်း ကို တွက်ယူ နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ(၁) ကျော် ကျော် သန်း ဆိုသော အမည်ကို တွက်ချက်လိုလျှင် K yaw K yaw T han (၂+၁+၁+၆) + (၂+၁+၁+၆) + … Read more
ဒီလက္ခဏာတွေကို ဖတ်ပြီး မိမိအိမ်ထောင်ရေးအကြောင်း ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်
လက္ခဏာဖတ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ကောက် ဟောကိန်းထုတ်ခြင်းကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကျင့်သုံးကြပြီး အိန္ဒိယ နက္ခတ်တဗေဒင် ပညာရပ်မှ စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အရည်အချင်းကို စစ်ဆေးဖို့ သို့မဟုတ် လက္ခဏာကို လေ့လာပြီး နိမိတ်ဖတ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အိမ်ထောင်ရေးလမ်းကြောင်း ကိုယ့်ဘာသာ အဓိပ္ပါယ်ကောက် နိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်တာက လက်နှစ်ခုကို ပူးထားပြီး အဲဒီမှာ ပေါ်တဲ့ အရစ်အကြောင်းတွေ အာရုံစူးစိုက် ကြည့်ရုံလေးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလမ်းကြောင်းများရဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်တွေမှာ လမ်းကြောင်းတွေ အနိမ့်မြင့်တူနေရင် သို့မဟုတ် ဆုံနေ လို့ရှိရင် သင်ဟာ နူးညံ့ကြင်နာသူ၊ ဆတ်ဆတ်ထိမခံသူ နဲ့ တည်ငြိမ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းပျော်ရွှင်မြူးတူးတတ်သူနဲ့ အဖော်မပြုလိုဘူး။ သင့် ခင်ပွန်း/ ဇနီးက သင့်မိသားစုနဲ့ … Read more